तपाईको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभावको कारण हेर्नुहोस यि चार राशिहरूमा यस्तो प्रभाव !! | सुदुरपश्चिम खबर
तपाईको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभावको कारण हेर्नुहोस यि चार राशिहरूमा यस्तो प्रभाव !!
मानिसको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभाव पर्छ । जसले उनीहरुको जिन्दगी प्रभावित हुन्छ । यहि नक्षत्रको आधारमा हरेक मानिसको राशि निश्चित हुन्छ । जसले उनीहरुको स्वभाव र भविष्यको संकेत मिल्छ । धेरै मानिसलाई भिडमा बस्न मन पर्छ भने केहि यस्ता मानिस नि हुन्छन् जो एक्लै बस्न रुचाउछन् । जान्नुहोस् कुन राशिको मानिसलाई मन पर्दैन भिड भाडः
१. मकर राशिः मकर राशि भएका मानिसलाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिका मानिस आफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरुसँग बस्न रुचाउछन्।
२. मिन राशिः एक्लै बस्नु यी राशी भएका व्यक्तिको सबै भन्दा ठुलो बल हो। यिनीहरु दिनमा पनि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियामा हराउछन्।
३. कर्कट राशिः यी राशि भएका व्यक्तिहरुको थोरै साथी हुन्छन् र उनीहरुसँग नै बस्न मन पराउछन्। कोहि नचिनेको व्यक्ति यिनीहरुको नजिक आए भने यी राशि भएका व्यक्तिले अप्ठ्यारो महशुस गर्छन।
४. कन्या राशिः यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन् । यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन ।
जिवनमा सधैं खुशी हुन पालना गर्नुहोस श्रीकृष्णका यि १० वचनहरू !=श्रीकृष्णको नाम जप्दा मात्र पनि अनेकौं दुखःबाट मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ । श्रीकृष्णका अनमोल वचन तथा ज्ञानमा ध्यान दिएमा थकानयुक्त अफिस लाइफमा समेत उर्जा पाउन सक्नुहुन्छ ।
कृष्णका ति अनमोल वचनहरु के के छन् :
१. रीसमा नियन्त्रणःक्रोधबाट भ्रम पैदा हुन्छ । भ्रमले बुद्धि व्यग्र बनाउछ । जब बुद्धि व्यग्र हुन्छ तब तर्क नष्ट हुन्छन् । र जब तर्क नष्ट हुन्छ तब व्यक्तिको पतन हुने गर्दछ । यदि त्यहि क्रोधलाई सकारात्मक शक्तिमा बदल्न सके त्यसको प्रयोग उपयोगि हुन्छ । जसलाई सफलता निश्चित छ ।२. कर्ममा खुसि खोजःजो ब्यक्ति आफ्नो कर्ममा आनन्द खोज्दछ तबमात्र उसले पूर्णता पाउछ । र पूर्णता पाएको ब्यक्ति मात्र खुसि रहन सक्दछ । तसर्थ आफ्नो काममा लिन रही जसले आनन्द खोज्दछ उसले त्यहि मात्र खुसि प्राप्त गर्दछ ।
३. मनमा नियन्त्रणःयदि कोही ब्यक्ति आफ्नो मनलाई नियन्त्रित राख्न सक्दैन उसले हमेशा आफैमाथि हानी पुर्याउने काम गर्दछ । ब्यक्तिको मन नै ईश्वर प्राप्तिको मार्ग भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यदि कोही ब्यक्ति मनलाई नियन्त्रण गर्दैन भने उसले शत्रु समान कार्य गर्दछ ।४. अनुशासनमा वसःब्यक्तिको मनमा जम्मा सन्देहहरु आत्मज्ञानको माध्यमबाट मात्र काट्न सकिन्छ । त्यसैले आफ्नो हृदयमा रहेका अज्ञानका सन्देहहरु आत्मज्ञानको तलवारले काट्नु पर्दछ । र अनुशासनमा रहेर जाग्ने वा माथि उठ्ने प्रयाश गर्नुपर्दछ ।
५. यी काम मात्र गरःकर्ममा प्राप्तिका लागि मेहनत आवश्यक छ । मेहनत मात्र अधिक कर्मले सफल हुन्छ । जो ब्यक्तिले कार्यमा निष्क्रियता र निष्क्रियता पनि कार्य देख्दछ उहि मात्र एक बुद्धिमान व्यक्ति हुन्छ ।६. हरेक कर्मको फल पाइन्छःहरेक कर्मको फल पाउने निश्चित छ । फल प्राप्तिको समय केहि ढिलो वा समय ब्यत्तित भएपछि पाइन सकिन्छ । तर फल प्राप्ति निश्चित छ । हरेक जीवनमा न केहि गुम्छ न त केहि ब्यर्थ जान्छ । तसर्थ ब्यक्तिले बिना फल प्राप्तिको चिन्ता लिई आफ्नो काम ईमान्दारीका साथ गर्नुपर्दछ ।
७. अभ्यास आवश्यक छ ःबन्द कोठामा बसेर सफलताका लागी लगाइएको बुद्धि ब्यर्थ छ । मन चञ्चल, अशान्त र ब्याकुल हुन्छ । असफलता देख्नासाथ मन त्यस कर्म गर्न प्रेरीत रहदैन । तर त्यहि मन नियन्त्रित गरी लगातार अभ्यास गरेमा असफलता सफलतामा परीणत हुन्छ ।८. दृढ विश्वास सफलताको कारकःव्यक्ति जे चाहान्छ, त्यहि बन्न सक्छ । तसर्थ लगन, निष्ठा र इमान्दारीताका साथ इच्छित बस्तुमा ध्यान लगाई एकाग्रका साथ कर्म गरेमा त्यो प्राप्ति निश्चित छ । मात्र कर्मको बेला दृढ विश्वास हुन जरुरी छ जो इच्छित वस्तुमा लगातार रहिरहोस् ।
९. तनाव कम गरःसमय परीवर्तनशिल छ । लगातार असफलता वा एकै प्रकारको कामबाट ब्यक्ति दिक्क हुने गर्दछ । दैनिक जिवनमा आफ्नो काममा मानिसको ध्यान भट्किन सक्छ र उ तनावमा आउने गर्दछ । त्यो बेला आफ्नो कामलाई भन्दा तनावलाई परीवर्तन गर्न आवश्यक रहन्छ । तनाव भगाउन मात्र तिमि आफ्नो कामलाई प्रेम गर त्यस अलावा अरुको कुराको परवाह नगर ।
१०. आफ्नो काम पहिला गरःअरु कोहि ब्यक्तिको कामलाई पुर्णता दिनुभन्दा आफ्नो कामलाई पुर्ण गर्नु उत्तम रहन्छ । चिन्तनको माध्यमबाट आफ्नो कामलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्दछ । अरुको काम पूर्णताका साथ गर्नुभन्दा आफ्नो काम अपूर्णताको साथ गरे पनि त्यो लाखौं गुणा उत्तम रहन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत !!